Xinhua Myanmar - ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၌ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံ နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဝင်လမ်းမရှေ့တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ နေရာယူထားသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)	Politics, Law & Military
ကုလသမဂ္ဂ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)ဘာသာပြန်/ကိုငယ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များအား တပ်မတော်မှ ထိန်းသိမ်းခံပြီးနောက် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးသွားရန် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် လုံခြုံရေးကောင်စီ အလှည့်ကျ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Barbara Woodward က မြန်မာ့အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်နေမှုများအား ဆွေးနွေးရန် လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များက သဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်း ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် လုံခြုံရေးမော်တော်ယာဉ်များ ရပ်ထားသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
“ ဒီရက်သတ္တပတ်အကုန်မှာ ဆွေးနွေးဖို့ နဂိုကတည်းက အစီအစဉ်ရှိပြီးသားပါ ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်ကုန်ပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မနက်ဖြန်မှာပဲ အဲဒီအကြောင်း ဆွေးနွေးကြဖို့ ရက်ရှေ့တိုးလိုက်တာကို ကျွန်မတို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။” ဟု Woodward က ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင် သတင်းထောက်များအားပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကာလရှည်ကြာစွာ ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့လုံခြုံရေး ခြိမ်းခြောက်မှုကို ကျွန်မတို့ ဆွေးနွေးသွားကြဖို့ရှိပါတယ် ၊ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း(ASEAN) နဲ့လည်း နီးကပ်စွာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ် ” ဟုဆိုသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်တွင် မြန်မာ့အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ “ပွင့်ပွင်းလင်းလင်းဆွေးနွေးခွင့်ရရန်”အွန်လိုင်းအစီးအဝေးတစ်ရပ်ကို တံခါးပိတ် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener က ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည့် လုံခြုံရေးကောင်စီအစီးအဝေးတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားသွားရန် ရှိကြောင်း ဂူတာရက်စ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Stephane Dujarric ကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အ‌ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလက မြန်မာ့အရေး နှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၌ နောက်ဆုံးဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ သမ္မတဦးဝင်းမြင့် ၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှ ဝန်ကြီးချုပ်များ ၊ အချို့သော NLD ပါတီ ဗဟိုအမှုဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် နံနက်အစောပိုင်းတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။
NLD ပါတီက လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံးတွင် နေရာအများစု အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများတွင် မဲစာရင်းလွဲမှားမှုများစွာရှိနေသည်ကို ဖြေရှင်းပေးရန်အတွက် တောင်းဆိုမှုနှင့်အတူ တပ်မတော်က လွှတ်တော်သစ် အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်အစီအစဉ်များကို ရွှေ့ဆိုင်းထားရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
UN Security Council to discuss Myanmar situation
UNITED NATIONS, Feb. 1 (Xinhua) -- The Security Council will discuss the Myanmar situation on Tuesday, following the detention of political leaders by the military in the country.
British ambassador to the United Nations, Barbara Woodward, whose country takes over the rotating Security Council presidency for the month of February, said the council members have agreed to bring forward the Myanmar issue given the latest developments.
"We had it on the program of work originally for discussion later this week. In discussion with council members, we have agreed now that we will move it up to discussion tomorrow, given the developments in Myanmar over the weekend," Woodward told reporters on Monday.
"We want to address the long-term threat to peace and security, of course working closely with Myanmar's Asian and ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) neighbors."
Tuesday's Myanmar virtual meeting will be held behind closed doors "to allow for frank discussion," she said.
UN Secretary-General Antonio Guterres' special envoy for Myanmar, Christine Schraner Burgener, will brief the Security Council on Tuesday, said Stephane Dujarric, Guterres' spokesman.
The last Security Council discussion on Myanmar was in September 2020, before the general elections in the country.
Myanmar political leaders, including State Counsellor Aung San Suu Kyi, President U Win Myint, regional and state ministers and some central executive committee members of the ruling National League for Democracy (NLD), were detained by the military in the early hours of Monday.
The military had demanded the postponement of new parliamentary sessions, claiming that there was massive voting fraud in the November 2020 general elections, in which the NLD won the majority of seats in both houses of parliament.
Previous Article တပ်မတော်က ထိန်းသိမ်းထားသော ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်အများစုကို ယနေ့ နေအိမ်သို့ ပြန်လွှတ်ပေးမည်
Next Article သမ္မတ နှင့် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်တို့ ထိန်းသိမ်းခံရဟု NLD ပြော